PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - ISafa ayinaxhala ngokuya kwiCCMA
ISafa ayinaxhala ngokuya kwiCCMA
UKULANDELA yonke imigomo yabasebenzi nokuqinisekisa ngokuthi lonke uhlelo lokushushiswa kobengumqeqeshi weBafana Bafana u-Ephraim “Shakes” Mashaba, kwaba sobala, kwenza iSafa ingasigqiziqakala isinqumo sikaMashaba, sokuyisa kwiCommission for Concilliation Mediation and Arbitration.
UMashaba ukhonjwe indlela emasontweni amabili edlule ngemuva kokungaziphathi kahle kwakhe ngemuva komdlalo iBafana eyashaya khona iSenegal ngo 2-1, eLimpopo ngoNovemba nyakenye.
Exoxa neSolezwe ngeSonto uDominic Chimhavi, obhekene nezokuxhumana kwiSafa nathi wayengomunye wofakazi, uthe abanalo nelincane ixhala.
“NgokweSafa yalandela yonke imigomo elawula abasebenzi ngesikhathi ilungiselela lolu daba okuhlanganisa ngokuvumelana nabameli bakaMashaba ukuthi bahlehlise ukuqulwa kwalo amahlandla amabili,” kusho uChimhavi othe ngisho usihlalo wesigcawu esiqondisa ubugwegwe ngummeli wasenkantolo enkulu yamaJaji uTT Serero.
“I-Safa yenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uthola ithuba elanele lokuzilungiselela. Ngakho asinalo noluncane uvalo ngokuya kwabo eCCMA,” kusho uChimhavi.
Elinye ilungu lesigungu sikazwelonke kwiSafa lithole uMashaba kufanele ngabe usaba ngisho ukubheka abantu baseNingizimu Afrika.
“Kuthini kuyena uma ecabanga ukuthi uzobe ebukela i-Afcon ehlezi kwakhe ekubeni ebekade engumqeqeshi weqembu lesizwe elihlulekile ukufinyelela emidlalweni yamanqamu eGabon? Noma angaya eCCMA angimboni ephumelela.
“Bekufanele ngabe uqale ngokuhamba yonke imigudu yangaphakathi njengokwedlulisa icala ekomitini elibhekene nalokho kodwa akakwenzanga nokungenza ahlangabezane nembibizane phambili.”
NgoLwesithathu umeluleki kaMashaba kwezomthetho uClaudio Bollo, utshele abezindaba ukuthi udaba lokuxoshwa kwakhe uzolufaka eCCMA ngokusombuluka kwesonto.
Uthi babhalele iSafa ngokuthi ayingaqali iqashe umqeqeshi omusha endaweni kaMashaba kuze kube lolu daba luyaxazululwa yiCCMA nokuzothi uma ephuma phambili akwazi ukubuyela emsebenzini wakhe.
“Akeneme vele ngalesi simo ngemuva komphumela omuhle kangaka behlula iSenegal. Kwethusa njengoba yonke into yenzeke ngesikhathi samaholide,” kusho uBollo ocashunwe kwiKick Off website.
Leli phephandaba liphinde lahabula izindaba zokuthi ukubambezeleka kokuthethwa kwalolu daba kwaba ngenxa yokungatholakali kukaMashaba okuthiwa babengakwazi ukumthola ukuze bamnikeze amaphepha ayenemininingwane yecala.
Ngenxa yokuthi wayezivale zonke izingcingo zakhe iSafa exhumana ngazo naye kwaba nzima ukumthola ngokushesha.
“Kwala ngisho esethunyelelwa imiqhafazo akazihluphanga ukuthi aphendule.
“Kuthe noma esetholakele wacela ukuthi anikezwe ithuba lokuxhumana nabeluleki bakhe bezomthetho ukuze bamcebise.
“Ngenxa yokuthi iSafa yayikulindele ukuthi udaba uzolufaka eCCMA yamvumela esicelweni sakhe.
“Namanje ayinalo nelincane ixhala ngokuya kwakhe kulesigcawu,” kusho umthombo.